Company - Hebei Samsung Birta Wire mesh Co., Ltd
Anping Sanxing Wire mesh Factory waxaa la aasaasay sanadkii 1990, taas oo ah soo saaraha ah xirfadeed ee mesh silig welded ,welded silig guddi mesh ,mesh silig hexagonal ,bowd silsilad link , crimped wire mesh, ahama mesh silig steel ,shabaqa dayrka ,mesh bir ballaadhiyey , window screen , galvanzied mesh silig square , fiberglass mesh , iyo shabaggeedii mesh , Maritime Bureau , mandiil hotooyin silig , silig annealed madow , cut wire etc. waxyaabaha Our hubkaas ayaa loo isticmaalaa in industry, beeraha, beerashada, dhismaha, gaadiidka iyo macdanta. By hadda aynu hore u aasaasay xiriirka ganacsi la 45 macaamiisha ka Southeast Asia, Asia, Europe, Bariga Dhexe, Afrika, iyo afar afar lacagta iibka iyo macaamiisha sannad kasta.
Waxaa jira 5 shirkadaha laan qaadan 19000 mitir oo laba jibbaaran, 165 shaqaale xirfad leh iyo 10000 metric awoodda bil kasta in ay la tacaalaan amar mugga kala duwan.
Waxaan leenahay a kooxda iibka qummanaado tayada aasaasiga ah ee masuulka ka ah macaamiisha, orod aan kala joogsi lahayn ee raacdada ee horumarka, iyo adeeg-iibka dib markii wanaagsan siiyaan. In ka badan 15 iibka oversea hadlaya Ingiriisi iyo wax ka badan 4 sano ka shaqeeyaan waayo-aragnimo ay celcelis ahaan.
Our 20 shaqaalaha horumarinta leh in ka badan 10 sano oo ay celcelis ahaan horumarin karaan 5 waxyaabaha cusub bil kasta. Marka xafiiska our dibada ururinta infomantion suuq-geynta iyo ka dibna waxaan ku yeeshaan waxyaabaha cusub kuwaas oo dalabka suuqa kulmaan.
ISO 9001, ISO14001 iyo habka maareynta tayo SGS certifiedOur Xogtani ISO 9001, ISO14001 iyo tilmaamaha SGS oo aan hubiyo tallaabo kasta ee habka wax soo saarka. Waxaan iibsato alaabta ceeriin ka soo saarayaasha si fiican u yaqaan in China, iyo kormeerto qalabka hor bakhaaraynta. Our 6 kormeerka qalab The bings Deparment Tayada ee 6 qalabka kormeerka iyo fuliya baadhsita pre-bixinta ee wax soo saarka final.
Waxaan ku kalsoon nahay in waxyaabaha our qaab fiican oo qiimo faverable. Waxaan ku eekaan 4 mabaadi'da tayada, qiimaha, sharafta iyo wax kuwaas oo si joogto ah u hirgelin dhan iibka ah.